किन अपरिहार्य छ नेपाली सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) सङ्कथन?
देशलाई युगौंसम्म विश्व मानचित्रमा अटल राख्ने हो, साख र शान बढाउने हो भने हाम्रो सौम्य शक्तिलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
किन चिन्ने चीन?
विश्वास तथा समन्वय मात्र होइन संशय सहितको चनाखो दृष्टिबाट पनि चीन चिन्ने नेपाली भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ।
खबरको कुहिरो चिर्ने चुनौती
एकातर्फ सूचना-प्रविधिको नयाँ युग, मान्यता अनि तौरतरिका र अर्कोतर्फ परम्परागत ठानिएको छापा पत्रकारिता। हामीलाई लाग्छ, यी दुवैको आपसी मान्यता, समझ र सहकार्यबाटै पत्रकारिताले थप उचाइ लिनेछ।
कविता सरकारका लागि हानिकारक छ ! महामारीको यो वेला ‘आहा ! मेरो स्वाधीनता, मेरो स्वतन्त्रता भनेर कविता लेख्ने समय’ नभएको बताउने हाम्रा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेका थिए, ‘कविता नसुन्ने मानिस भैंसी जस्तै हो ।’
वर्ष २०७७ः सादा जीवन, सानै विचार ! कोरोनाभाइरसको महामारीबाट संसारले के सिक्दैछ, थाहा पाउँदै जाउँला, तर नेपालीले सिक्ने कुरा भने ‘घाम जत्तिकै छर्लङ्ग’ छ ।